निवर्तमान (Nibartaman) ||: रुपचन्द्रको देशमा
निद्रा पटक्कै परेन । पटकपटक आ“खा चिम्लने कोशिश नगरेको होइन । तरपनि आ“खाका परेलीहरु जोडिन पटक्कै मानेनन् । जति कोशिश गरे पनि निदाउन सकिएन । रात निकै लामो भएको अनुभूति भयो । समय पनि टक्क अडिए जस्तो भयो । उठेर घडी हेरें, रातको १२ः३० भएको रहेछ । हैन, सिंगो रात त बा“की नै छ, यसरी भएन भनेर फेरि निदाउन कोशिश गरें । श्वासप्रश्वास प्रक्रियातिर ध्यान केन्द्रीत गरें, अह“ झन् निद्रा हट्दै गयो । ममा भने ताजगी आइनै रह्यो । झन् ‘रिफ्रेस’ हु“दै पो गए“ म त । निद्रा आउनुको साटो ताजगीपन बढ्दै गएको महशुस भयो । जर्बजस्त आ“खा नचिम्लिएको त कहा“ हो र ? तर निद्रा आएकै होइन । बरु यात्राका रोमाञ्चकारी दृष्यहरुको कल्पनाले मस्तिष्कलाई पुर्नताजगी प्रदान गरि नै रहे । फेरि उठें, घडी हेरें, १ः३० भएको रहेछ । आ“खा त झन् वर्षात्मा पानी परेपछि खुलेको आकाश झैं छ्याङ्ग पो भए ।
अब पनि ओछ्यानमा पल्टेर सुत्न नचाहेको नानीलाई जर्बजस्ती कोक्रामा हालेर ‘हो हो... हा हा... नु नु ...’ भनेर हल्लाएझैं आ“खा चिम्लिएर पल्टिनुको कुनै अर्थ थिएन । म पनि अब ओछ्यानबाट उठें । र, यात्राको लागि सरसामानसहितको झालो मिलाए“ । अनि भोलि ...(भोलि भन्नु बिहानको २ बजिसकेको थियो) यात्रामा निस्कने तयारी थियो । यति गर्दा पनि निद्रा लाग्ने कुनै कुञ्जायस थिएन । म झन् रिफ्रेस भएको थिए“ । अब आ“खा चिम्लिएर निद्रा कुर्नुको अर्थ थिएन । त्यसैले अनिंदो रातको सदुपयोग गर्न हुईंकिए“, अखण्ड भण्डारीको ‘मलाया एक्सप्रेस’ को बा“की अंशतिर ।
सिंगो रातमा यात्राको तयारीका लागि धेरै काम गरेकै थिए“ । घरबाट निस्क“दा बिहान ६ बजेको थियो । अघिल्लो दिनसम्म खुलेको आकाश केही धुम्म परेको थियो । तर पानी भने परेको थिएन । भ्रमणको लागि मलाई साथ दिंदै थिइन् आफ्नै जीवन संगिनीले र साथमा थियो एउटा पुरानो (खटारो नै चाहिं होइन) मोटरसाइकल । त्यसो त दसैं भ्रमणको लागि भन्दै आफूले प्राध्यापन गर्ने क्याम्पसमा धेरै छलफल भएको थियो । भ्रमणकै लागि भनेर कोषको व्यवस्थापन पनि भएको थियो । तर, दसैं अघि जाने कि दसैं पछि भन्ने कुरामा सबैबीच सहमति निर्माण हुन नसक्दा अन्ततः भ्रमण नै रद्द हुन पुगेको थियो । आखिर क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्ने बौद्धिक व्यक्तित्वहरुले एउटा भ्रमण जाने विषयमा सहमति गर्न सकिएन भने नेताहरुलाई संविधान बनाउने सकेनन्, देश बनाउन सकेनन् भनेर गाली गर्नु उचित नहुने निश्कर्ष निकालेर अन्ततः क्याम्पसको भ्रमण रद्द भएको थियो । त्यसो त घुमफिर भनेपछि जोकोही पनि उत्साहित हुन्छन् नै । त्यसमा म त अझ बढी भुतुक्कै हुन्छु । यसो समय मिल्यो कि हिंडिहाल्न मन लाग्छ, झोला च्यापेर ।
तर, पछिल्ला केही महिनाहरुमा घुमफिर गर्ने अवसर जुरेको थिएन । फेरि प्राध्यापन पेशामा संलग्न भइसकेपछि, आफू अनुकूल घुमफिरको लागि समय निकाल्न धेरै कठिन हु“दोरहेछ । अझ केही दिनको लामो यात्रा त संभव नै नहुने । केही महिनादेखि नै घुमफिरको तलतल त थियो नै । क्याम्पसले नै भ्रमणमा लैजाने कुरा सुन्दा म फुरुक्क नै परेको थिए“ । मेरो मनसुवा पनि भ्रमण चाहिं दसैंको लगत्तै होस् भन्ने थियो । घुम्ना जाने कुराले म पुलकित नै भएको थिए“ । तर, भ्रमणको मिति र गन्तब्यमा सहमति हुन नसक्दा भ्रमण नै रद्द हुनुपरेकोले अलि नमज्जा भएको थियो । त्यसैले म दसैंलाई नै यात्रामय बनाउने टुंगोमा पुगेको थिए“ । र मरी जीवन संगिनी भ्रमणको सहयात्री बन्दै थिइन् । उनी पनि घुमफिर भनेपछि हुरुक्कै हुन्छिन् । हामी दुईलाई आफ्नै पुरानो यामाहा मोटरसाइकलले साथ दिंदै थियो । मोटरसाइकललाई अघिल्लो दिन नै मर्मत गरेर ठीक हालतमा राखेको थिए“, ताकि घुमफिरमा कुनै प्रकारको यान्त्रिक गडबडी नहोस् र गन्तब्यमा सजिलै पुग्नसकियोस् ।
जसैजसै बुटवलबाट पूर्वतर्फ हुईंकिइयो, बिहानको चिसो सिरेटोले शरद् ऋतुको गुलावी जाडोको अनुभूति गरायो । पहिलेपहिले काठमाडौंमा रह“दा शरद्को आगमनस“गै भक्तपूरका फा“टहरुमा लहराउ“दो धानबालीस“गै ठोक्किएर बहेली खेल्दै आउने हावाका झोंकाहरुको याद दिलायो । र, ती धानका चिसा बाला पन्छाउ“दै फा“टमा चङ्गा छोप्न दौडिएको क्षणले केहिबेर ‘नोस्टाल्जिक’ भएछु म पनि । न जाडो न गर्मी, शरद्को आगमनस“गै तराईको मौसम पनि सन्तुलित हु“दै जान्छ । बिहानी यात्रालाई बुटवल वरिपरीको मौसमले पनि रोमाञ्चित बनाइरहेको थियो । पूर्वतिरको आकाश रातो हु“दै थियो, आकाशले नया“ सुनौलो बिहानीको संकेत गरेको थियो । कावासोती पुग्दा बिहानको आठ बजेको थियो । कावासोतीमा चिया नास्ता गर्ने र केहीबेर आराम गर्ने विचारले हामी रोकियौं । त्यसो त कावासोती पुग्दा मलाई रमाइलो अनुभूति हुन्छ । विगतमा कावासोतीमा बसेर काम गरेको सम्झना मानसपटलमा सिनेमाका दृष्यझैं एकएक गरी आइहाल्छन् । अहिलेको पेशालाई अवलम्बन गर्नुभन्दा पहिले वित्तीय संस्थामा कार्यरत रह“दा केही महिना कावासोतीमा बस्ने मौका मिलेको थियो । एक वित्तीय संस्थामा कार्यरत पूर्व सहकर्मी एवं मित्र ज्ञानेन्द्र मैनालीस“गको भेटले पुराना दिनहरुको याद दिलायो । तर, उनीस“ग धेरैबेर गफगर्ने समय थिएन । त्यसैले झण्डै आधा घन्टाको विश्रामपछि हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो ।
नारायणगढ पुग्दा दस बजेको थियो । घुमफिरमै रमाउने हामीलाई कहिंजान हतारो थिएन । अझ भनौं समय प्रशस्त थियो । समयलाई अधिकतम् स्थान भ्रमण गर्न र नया“नया“ ठाउ“हरु घुम्नलाई प्रयोग गर्ने मनसुवाले हामी यात्रारत थियौं । नारायणगढ काठमाडौं जा“दा धेरै पटक हिंडेको बाटो भएपनि त्यसलाई धितमरुन्जेल नियाल्ने रहर थियो । यसर्थ हामी बजारको कुनाकुनासम्म मोटरसाइकलको ह्याण्डिल घुमाएर फन्को मा¥यौं । यसै क्रममा रामपुरको कृषि क्याम्पस र भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालतिर पनि लागियो । क्यान्सर अस्पताल पुग्दा केही वर्ष अघि घा“टीको अपरेसन गर्नुपर्नेमा एक महिलाको पाठेघर निकालेको घटना सम्झिन पुग्दा, एक राउन्ड हा“स पनि उठ्यो । यद्यपि अस्पतालको रुपमा भरतपुरको क्यान्सर अस्पताल सहि स्थानमा रहेको र अस्पतालभित्रको वातावरण पनि बिरामीमैत्री झैं लाग्यो । वास्तवमा हाम्रा सहरबजारका अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होमहरु बजारको अत्यन्तै व्यस्त र भीडभाडयुक्त स्थानमा हुन्छन् । तिनले बिरामीलाई राहत महशुस गराउनु भन्दा बजारको कोलाहल र यातायातका साधनहरुका कर्कशयुक्त ध्वनिले बिरामीलाई थप तनाव दिन्छन् झैं लाग्छ । यस हिसाबले भरतपुर क्यान्सर अस्पताल असाध्यै व्यवस्थित र रमणीय लाग्यो ।
अस्पतालको अवलोकनपछि हामी अस्पतालको २ नं. गेटबाट दक्षिणतर्फको ओरालोतिर हुईंकियौं, रामपुर कृषि क्याम्पसको अवलोकन गर्न । झण्डै ८÷१० किलोमिटरको यात्रापछि हामी कृषि तथा जीव विज्ञान अध्ययन संस्था अर्थात रामपुर कृषि क्याम्पस पुग्यौं । त्यसो त अहिले उक्त क्याम्पस कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा रुपान्तरित भएको छ । क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार राम्रै रहेछ । यस क्याम्पसले कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ । जसमा राज्यले धेरै लगानी गरेको भएतापनि कृषि क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेका अधिकांश विद्यार्थीहरुको रोजाई युरोप र अमेरिकाका फार्म हाउस तथा अनुसन्धान केन्द्रहरु हुने गरेको कुरा थाहा पाउ“दा मन अमिलो भयो । यही प्रसङ्गले राज्यले ठूलो लगानी गरेर प्रत्येक वर्ष सयौं विद्यार्थीहरुलाई एमबीबीएस पढाउ“छ, तर उनीहरु पास भएपछि राज्यले खटाएको दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न अनिच्छुक हुन्छन् र गाउ“गाउ“का स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरु डाक्टरबिहिन भएका समाचारहरु आइनै रहेका हुन्छन् । कृषि क्याम्पसमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरुको रोजाई पनि नेपाली भूमि नभएर युरोप र अमेरिकाका फार्म हाउसहरु भएको देख्दा भने नरमाइलो लाग्यो । ती सबै विज्ञहरुले नेपालको कृषिलाई वास्तवमै आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्नका लािग नेपालकै गाउ“गाउ“मा गएर सेवा गरे कृषि उत्पादनमा हामीले धेरै प्रगति गर्न सक्नेथियौं । तर, सबैलाई आफ्नो भविष्य र करियरकै चिन्ता न छ !
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको छोटो अवलोकनपछि अघि बढेको हाम्रो यात्रा चितवनको टा“डी गएर रोकियो । टा“डीमा पेटपूजा गरिसकेपछि हामी पर्यटकीय क्षेत्र सौराहातर्फ हुईंकियौं । नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनमा सौराहाको आफ्नो योगदान छ । विशेषगरी जंगल सफारी र वन्यजन्तुहरुको अवलोकन गर्नकै लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण गरिन्छ । तर, हामी भने राप्ती किनारमा बसेर चिसो जुसस“गै केहिबेर सुस्तायौं । अहिले शान्त र सौम्य देखिएको राप्ती वर्षा याममा सौराहालाई नै चुनौति दिंदै उर्लिन्छ । राप्तीकै किनारमा रिसोर्ट खोलेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका एक रिसोर्ट सञ्चालकले व्यथा पोखे, ‘राप्तीकै कारण वर्षमा ६ महिना व्यवसाय गरेपनि वर्षा याममा सामान घरमा थन्क्याउनु परेको छ ’ । तथापि यसवर्ष राप्तीको वेगलाई पारिपट्टी नै मोड्न जालीभित्र ढुंगा थुपारेर सानोतिनो पहाड नै बनाइएको रहेछ । त्यसैतर्फ संकेत गर्दै उनी भन्दै थिए, ‘यसपाली भने यसले काम गर्छ कि ?’
सौराहामा शरीर तताएर राप्ती हु“दै बहेको वैशालु वतास र चिसो वियरको चुस्की लिंदै रमाइरहेका गोरा छाला भएका विदेशी पर्यटकहरुलाई त्यहीं छाडेर हामी भने यात्राको क्रममा अघि बढ्ने निश्चय गरेर फर्कियौं । जंगल घुम्ने रहर भए तापनि यसपटकका लागि त्यतातिर लागिएन र सिधै पूर्वतिरकै यात्रा तय गरियो । दुई बजे सौराहाबाट हुईंकिएको हामी हेटौंडा पुग्दा दिउंसोको चार बजेको थियो । हेटौंडामा रहेको शहिद समारक पार्क हेर्न उकालोतर्फ मोडियौं । हेटौंडा बजारबाट झण्डै २ किलोमिटर पश्चिमतर्फ रहेको उक्त पार्क वास्तवमै हेर्न र घुम्न लायक छ । पार्कमा अवस्थित एउटा ठूलो चट्टानमा भक्ति थापा, भीमदत्त पन्त, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा लगायतका १२ जना सहिदहरुको आकृति अंकित गरिएको छ, जसले नेपालको स्तन्त्रताको लागि र परिवर्तनकोलागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिए । त्यस्तै स्व. मदन भण्डारीको सम्झानामा मदन बाटिका पनि निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी सानो चिडिया घरसमेत छ, जसमा चित्तल, मृग, गोही, खरायो, कछुवालगायतका केही जनावरहरु राखिएको छ । केहि समय अघि संभवत नेपालमै पहिलो गणतन्त्र स्तम्भ निर्माण गरिएको छ, उक्त स्तम्भले पनि पार्कमा आकर्षण थपेको छ ।
हामी पनि स्मारक पार्कको अवलोकन गरिसकेपछि पार्कको गेटैनेर रुपचन्द्र विष्टको सम्झानामा राखिएको ‘थाहा’ स्तम्भअगाडि अडिएर एकपटक निडर, अटल योद्धाको परिचय बनाएका रुपचन्द्रलाई सम्मान भावले अभिवादन गर्दै फर्कियौं । ‘थाहा’ उनको नारा थियो । जनताले ‘थाहा’ नपाएर दुःख पाउनुपरेकोले सबैले ‘थाहा’ पाउनुपर्छ भन्ने उनको अभिव्यक्ति थियो । थाहा अभियन्ता रुपचन्द्र विष्टबारे अनेक किस्साहरु चलनचल्तीमा छन् । ती मध्ये एक मैले सम्झिए“ । एकदिन रुपचन्द्र चुनावी प्रचारमा गाउ“घर गएका थिए । उनी एक्लै हिंड्थे रे । गाउ“मा जा“दा एउटी बुढी आमा बारीमा कोदालो खन्दै रहिछन् । रुपचन्द्र त्यहीं गएर पहिला आमास“गै खन्न थालेछन् । मेलापात सकिएपछि घरको पिंडीमा बस्दै भनेछन् – ‘आमा भोट कसलाई हाल्नुहुन्छ ?’ बुढीले भनिछन् – ‘खै कसलाई भन्नु र? त्यही रुपचन्द्रेलाई हाल्ने त होला नि, सबैले त्यसै भन्छन्, मोरोलाई देखेको पनि छैन, कस्तो छ कुन्नि ?’ त्यसपछि रुपचन्द्रले हा“स्दै आमा त्यो रुपचन्द्रे मै हु“ भनेर परिचय दिएका थिए रे । उनी अक्सर गाउ“मा जा“दा सामान्य रुपमा मेलापातमा जान लागेको झैं जान्थे रे । आफ्नो कुनै विशिष्ट पहिचान र परिचय बिना नै हिंड्थे भन्ने सुनिएको थियो । अहिले पनि चुनावी माहोल तात्तिँदै गएको छ । खै अहिले रुदाने उर्फ रुपचन्द्र जस्ता जनताको कामकाजमा सहयोग गर्ने नेता भेटिएलान् के ? फेरि पनि एकपटक तिनै रुदानेलाई सलाम गर्न मन लाग्यो ।